8 Tallo iyo tallaabooyin looga soo horjeedo sciatica | Vondt.net
8 Talo wanaagsan iyo tillaabooyin looga soo horjeedo sciatica
15 / 03 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Adiga ama qof aad taqaanid ma ku dhacdaa xanuunka 'sciatica'? Halkan waxaa ah 8 talo bixinno iyo daaweyn oo bixin kara xanuun joojiye iyo hagaajinta shaqada ee xanuunka dareemeyaasha!
1. Massage iyo murqaha shaqada: Farsamooyinka jirku waxay kordhin karaan wareegga dhiigga ee aagga waxayna yareyn karaan murqaha murqaha dhabarka hoose, miskaha iyo kursiga. Daaweynta cirbadaha loogu talagalay sciatica iyo sciatica sidoo kale waxtar ayey yeelan karaan.
2. Nasasho: Waxaa lagugula talinayaa inaad dhegeysato calaamadaha xanuunka ee jirka - haddii aad qabtid xanuun dareeme, markaa waa digniin fiiqan oo ah inaad wax ka qabato. Haddii jidhkaagu ku weydiiyo inaad joojiso wax -qabadka, markaa si fiican baad u dhegeysanaysaa. Haddii hawsha aad qabato ay ku xanuuniso, markaa kani waa habka uu jidhku kuugu sheego inaad samaynayso "waxoogaa aad u badan, xoogaa dhakhso ah" iyo inaysan haysan waqti ay ku soo kabato ku filan inta u dhexeysa kalfadhiyada. Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho "booska deg-degga" meesha aad jiifto iyadoo lugahaagu sarreeyaan (waxa loogu yeero "90/90" booska) si loo yareeyo labada laf-dhabar ee hoose.
3. Qaad talaabooyin ergonomic: Isbedelada yar yar ee ergonomic waxay sameyn karaan isbadal weyn. Tusaale ahaan. Ma leedahay miis fadhiya? Ku maalgeli miis hoos u hooseeya oo kuu oggolaanaya inaad kala duwanaan karto culeyska maalinta shaqada oo dhan. Fadhiga joogtada ah maahan xalka markaad ku xanuunsaneyso xanuunka 'sciatica', sidaas darteed kursi cusub oo xafiis ayaa sidoo kale - doorbidi kara midka dhaqaaqa. Sidoo kale dhakhtarka dib u eegis ku samee farsamadaada qaadista haddii tani ay tahay wax aad si joogto ah uga qabato shaqada.
4. Daaweynta wadajirka ah: La qabsashada, daaweynta wadajirka ah ee taxaddarka leh (tusaale ahaan, lafopractor ama daaweeyaha gacanta) waxay waxtar u yeelan kartaa daaweynta isku-dhafka wadajirka ah ee u dhow, taas oo iyaduna noqon karta sababo sii xumaanaya Qalitaanka wadajirka ah ayaa badanaa ah qodob muhiim u ah xanuunka muuqaalka astaamaha astaamaha. Dhakhtarku wuxuu sameyn doonaa baaritaan dhameystiran ka dibna wuxuu go'aamin doonaa habka ugu macquulsan ee adiga kugu habboon, inta badan wuxuu ka kooban yahay isku-darka shaqada muruqyada, hagaajinta wadajirka ah, jimicsiga guriga, fidinta iyo talo-bixinta ergonomic.
5. Kala bixi oo dhaqaaq dhaqaaq: Fidinta iftiinka joogtada ah iyo dhaqdhaqaaqa aagga ay dhibaatadu saameysey waxay hubin doontaa in aaggu uu haayo qaab dhaqdhaqaaq caadi ah isla markaana ka hortagayo gaabinta muruqyada la xiriira, sida glutes iyo piriformis. Waxay sidoo kale kordhin kartaa wareegga dhiigga ee aagga, taas oo gacan ka geysaneysa habka bogsashada dabiiciga ah. Ha istaagin gebi ahaanba, laakiin sidoo kale dhageyso marka jirkaagu kuu sheego inaad nasasho qaadato. Haddii aad ka fekereyso nooca jimicsi ee aad sameyn karto - markaa waa inaad la tashataa caawimaad xirfad leh. Waxaa laga yaabaa inaad markaa ka dib hesho talosiin ku saabsan jimicsi caloosha oo hooseeya ama jimicsiga McKenzie waxaa suurta gal ah.
- Xirmooyinka kuleylka ayaa muruqyada sii wadi kara oo qaboojinta waxay yareyn kartaa xanuunka neerfaha
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad si joogto ah u isticmaasho baakadaha kuleylka si muruqyadaadu u socdaan. Xeerka wanaagsan ee suulka ayaa ah "qabooji marka ay dhab ahaantii xanuun badan tahay oo diirran marka aad rabto inaad sii waddo". Sidaa darteed waxaan ku talinaynaa Xirmadan kulul ee dib loo isticmaali karo (waxaa loo isticmaali karaa labadaba xirmo qabow iyo xirmo kuleyl ah - maxaa yeelay labadaba waa lagu qaboojin karaa qaboojiyaha waxaana lagu kululeyn karaa microwave) taas oo sidoo kale la socota duufaan wax ku ool ah oo waxtar leh si aad ugu dhejiso meesha aad ku xanuunsan tahay.
6. Adeegso miraha: Jilaabashada waxay astaan ​​u noqon kartaa calaamadaha, laakiin iska hubi inaadan u isticmaalin jalaatada wax ka badan inta lagugula taliyay iyo weliba inaad hubiso inaad haysato shukumaan dhuuban oo khafiif ah ama wax la mid ah agagaarka barafka. Talobixinta bukaan-socod eegtada badanaa waa 15 daqiiqo aagga ay dhibaatadu saameysey, ilaa 3-4 jeer maalintii. Haddii aadan haysan bac baraf ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qaar ka mid ah qabow aad kujirto qaboojiyaha. Biyo qabow ku buufi sidoo kale waa badeecad caan ah.
7. Kursiga keydka: Farsamadan daaweyntu waxay ku shaqeysaa iyada oo la siinayo masaafo dheeri ah inta udhaxeysa vertebrae, gaar ahaan foramen intervertebralis, taas oo iyana keenta cadaadiska ka yimaada neerfaha xanaaqa leh.
8. Raadi daaweyn hadda - ha sugin: Caawimaad ka hel dhakhtar si aad "uga gudubto dhibaatada" si ay kuugu sahlanaato inaad samayso tallaabooyinkaaga. Dhakhtarku wuxuu kaa caawin karaa daaweynta, jimicsiyada loo habeeyey iyo fidinta, iyo sidoo kale talooyinka ergonomiga si loo bixiyo hagaajinta shaqaynta iyo calaamadaha calaamadaha labadaba.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Isjias.jpg?media=1648573622 743 1080 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-03-15 20:29:212017-05-09 21:03:088 Talo wanaagsan iyo tillaabooyin looga soo horjeedo sciatica
Nidaamka Lupus Erythematosus Sonkorowga Mellitus - Nooca 1 (Sonkorowga)